December 2020 - Myanmar People Alliance
ဒီအိမ်မက်တွေမက်ခဲ့ရင်မဖြစ်မနေ ထီ ထိုးပါ …
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဒီအိမ်မက်တွေ မက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီ ထိုးပါ … ထီ ပေါက်မယ့် အိမ်မက် (၁) အိမ်မက်မြင်မက်ရာတွင်ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ် ကြီးဖြစ်စေ ကြွရောက်လာပြီးလျှင်သင်အလိုရှိသောဆန္ဒပြည့်ဝစေပါမည်။တရားကိုသာအားထုတ်ပါဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊သို့မဟုတ်မည်သည့်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်၍ မည်သို့ပြုလုပ်ပါဟုမှာကြားခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊အိမ်မက်တွင် မြင်မက်ရပါက နတ်ကြီး၊ဝိဇ္ဇာကြီးများနှင့်တွေ့ရသော အိမ်မက်သည်။
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် အဖြစ်ကဒီလိုပါ ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေရန်ကုန်ကိုဘုရားဖူးပြီး ညနေ၃နာရီထွက်သောဂျပန်ရထားခေါ်သောထိုရထားနဲ့လိုက်ခဲ့ပါသည်။ ပဲခူးဘူတာသို့ညနေ၆နာရီ၃၀တွင်ရောက်ပါသည် လိုရင်းကိုခနနေဆက်ပါမည်ဘူတာတိုင်းတွင်ဈေးသည်များနှင့်ဈေးဆိုင်များမရှိတော့ပါ။ဘူတာထဲဈေးမရောင်းရလို့စည်းကမ်းထုတ်ထားတယ် ထင်သည်ဟုတွေးရင်းဈေးသည်လေးများဘာလုပ်စားကြပါလ်မ့်လို့ စဉ်းစားပြီးသနားမိသည်။ သို့သော်ဘူတာတိုင်းမှာသန့်ရှင်းသွားတာကိုတော့ကြိုဆိုပါသည်လိုရင်းကိုဆက်ပါမည် ပဲခူးဘူတာတွင်၃မိနစ်ရပ်နားပါသည်ရထားပေါ်သို့ဒူးရင်းသီးများရောင်းသောဈေးသည်များတက်လာပါသည်။ အလာတုန်းကလဲအချိန်လုပြီးလာရပါသဖြင့်မန်းတလေးမှမိတ်ဆွေများအတွက်လက်ဆောင်မပါသဖြင့်အတော်ပဲဟုစဉ်းစားပြီးဈေးနှုန်းများကိုမေးကြည့်သောအခါ ၃လုံးတစ်တွဲအသေးဆိုရင်၄ထောင်ကျပ်အကြီးလုံးဆိုရင်၇ထောင်ကျပ်ဟုပြောပါသည်။ နောက်ဆုံးအကြီး၃လုံးတစ်တွဲကို၅ထောင်ကျပ်ပဲပေးပါဟုပြောပါသည်မန်းလေးမှာတစ်လုံးကို ၅ထောင်ကျပ်လောက်ရှိတာတန်လှချည်လားဟုလက်ဆောင်ပေးချင်တဲ့စိတ်ရယ်ရထားကလည်း၃မိနစ်ပြည့်လိုထွက်ဖို့ခရာသံကြားတာရယ်ကြောင့် မြန်မြန်လေးဝယ်လိုက်ပါသည်။ နံနက်အိမ်ကိုရောက်ပီးလက်ဆောင်တွေလည်းပေးလိုက်ပါသည်အမတွေရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပစ္စည်းတခုမေ့ကျန်နေ၍သွားယူသောအခါအမမှမင်းဒူးရင်းသီးတွေခွဲပြီးပြီလားဟုမေးပါသည် လက်ဆောင်တော့ပေးပြီးပြီ ကိုယ့်စားဖို့တော့ နေ့လည်မှခွဲစားတော့မည်ဟုပြောသောအခါအမကရီပါတော့သည်
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဒီနေ့လဲ ရန်ကုန်ကတစ်ဦးကဒီညီလေးအတွက် လေဆိုင်ထောင်ပေးဖို့ ဆက်သွယ်လာပါတယ်အားလုံးလေးဦးရှိပါပြီ ဒီညီလေးအိမ်ရောက်တာနဲ့ ဒီကလေးရဲ့ဆန္ဒကိုသူ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအားလုံးသိအောင်ကျွန်တော်ကိုတိုင်သွားရောက်ပြီးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် အလျူရှင်တွေကိုလဲ ခဏတားထားရချင်းကသူ့ဘဝအမှန်ရယ် သူ့မိဘတွေရယ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးရက်မိရက်ဖတွေနဲ့ဆုံပြီးမှ သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုသိရပြီဆိုတာနဲ့ အလျှူရှင်တွေကို ကျွန်တော်ပြန်အကြောင်းကြားပြီး သူ့ရက်မိရက်ဖများနဲ့အတူ ဒီကလေးကိုလျှူကြမယ့် ပစ္စည်းအားလုံးကိုသေချာစွာအတိအကျအပ်နှံချင်တဲ့သဘောပါညီလေးရေမင်းကိုဝန်ရန်သူတွေထောက်ပန့်ကူညီသူတွေအခုလိုတွေ့ရမြင်ရတော့အကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ညီလေးရာအရင်ကတင်ထားတဲ့ သတင်းလေး ကျွန်တော်ပိုက်ဆံသိပ်ရှိချင်တယ်ဆိုတာအဲဒါတွေလဲပါတယ်ဗျအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဘဝကိုဇွဲမရှော့ပဲလုပ်နေကြရတဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးချင်တာဗျဒီကလေးအသက်က၁၂နှစ်တစ်လရငွေက
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ပရိတ်သတ်ကြီးရေအခုတစ်ခါပြောပြပေးမှာကသိန်း၃၀ကိုမမက်ပဲသန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘေးမဲ့မြေမှာလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့နွားပိုင်ရှင် ဆိုတာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နွားပိုင်ရှင်ကတော့သူရဲ့နွး၂ကောင်ကိုသိန်း၃၀ပေးဝယ်တာတောင်မရောင်းဘဲ၁၃ရက်နေ့ကလှည်းကူးသစ်နီပင်စေတနာရွာတွင်ရှိသောသန်လျင်သဘာဝ တရားရိပ်သာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘေးမဲ့မြေတွင်အရှင်ပညာသီရီဦးဆောင်ပြီးကယ်တင်ထားသောမုဒိတာပုံရိပ်တရားရိပ်သာဘေးမဲ့ဂေဟာသို့လာရောက်ပြီး နွားနှစ်ကောင်အားဘေးမဲ့ပေးသွားတဲ့နွားပိုင်ရှင်များဖြစ်ပါတယ်။ နွားပိုင်ကတော့အသုံးမပြုတော့တဲ့သူတို့ကလေး တွကိုမားပြားလှတဲ့အသာပြာငွေကိုတောင်မမက်မောဘဲအကြင်နာတရားထားကာစာနာထားသောသခင်များနှင့်တွေဆုံရတာနွားလေးနှစ်ကောင်ရဲ့ကုသိုလ်ကံပါဘဲ။ ဘေးမဲ့ပွဲနေ့ ကျရင်လဲသူ့နွားလေးတွပါဘေးမဲ့ပွဲမှာထည့်ပေးဖို့။သူတို့လဲလာကြည့်ပါရစေလို့ပြောသွားရှာတယ်။ မွန်မြတ်လှတဲ့စိတ်ထားပိုင်ရှင်များဤကောင်းကျားဘဝပေါင်းများစွာခံစာရပါစေ။ ဤကံကောင်းလှသောနွားလေးနှစ်ကောင်လဲဘေးမဲ့တောမှာသက်တမ်းစေ့အေးချမ်းပါစေ။ နွားပိုင်ရှင်၏ မြတ်သောစေတနာကိုသာဓုခေါ်ထိုက်ပါပေတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလဲသာဓုခေါ်နိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ် Zawgyi
ပိုက်လုံးတလုံးအတွက်ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမား(၃) ဦးရဲ့အသက်တွေပေးလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ချချိန်းဆောင်းခရိုင်ထဲမှာဒီဇင်ဘာ၂၉ရက်မနက်ကလှောင်ကန်ထဲဆင်းသွားတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအာက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီ၃ ယောက်သေဆုံးကာ၁ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ချနယ်လ်၈ထိုင်းတီဗွီသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ အဆိုပါအလုပ်သမားတွေဟာချချိန်းဆောင်းမြို့နခွန်းနိန်းခေတ်ရပ်ကွက်ထဲရှိ စက္ကူ ရီဆိုင်ကယ်လ်စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး မနေ့ မနက် ၁၁ နာရီလောက်က အသက်၂၀ နှစ်ရွယ်ရှိအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကလှာင်ကန်တိုင်ကီပေါ်တက်ပြီးတိုင်ကီထဲပြုတ်ကျသွားတဲ့ပိုက်လုံးကိဆင်းဆယ်ခဲ့တာပါ။ အဆိုပါအလုပ်သမားဟာတိုင်ကီအောက်ခြေရောက်သွားတဲ့အခါသတိမေ့လဲကျသွားလို့နောက်ထပ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အလုပ်သမား၂ယာက်ကသူ့ကိုကယ်ဆယ်ဖို့လိုက်ဆင်းသွားစဉ်သူတို့လည်း သတိမေ့သွားကြတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကသတင်းထောကကိုပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက် နောက်ထပ်အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုကယ်ထုတ်ဖို့လှောင်ကန်အောက်ခြေအပြင်ဘက်ကနေ ွှနဲ့ဖြတ်ဖောက်လိုက်ကြောင်း၊ ပေါက်သွားတဲ့လှောင်ကန်နံရံကိုဖွင့်ဟလိုက်ရာမှာအဆိုပါအလုပ်သမားလည်းမေ့လဲသွားတယ်လို့
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ကှကအွမညွ ,,ကှောကမွနီဒယွဘတွေ၂၂သနွးကှေးဖလားလုပှဲမှာအနိုငရွရှိလို့ဒီကှကရွဲ့တနဖွိုးကအောတွိဘတွ၂၂သနွးတနဖွိုးရရှိသှားပါတယွ(ထိုငွးမှာ တိုကကွှကကွိုတနဖွိုးဖှတနွညွးကနိုငကွှေးအပေါမွူတညပွီး တနဖွိုးသတမွှတယွူကှတာပါ။နောကွမနီဒယသွညထွိုငွးကှကမွှိုးစဈစဈမဟုတပွါမှနမွာတိုကကွှကနွဲစပဖွောကထွားတာပါ။ကှကတွဈကောငကွိုခှပရွငွ ၃ခှီမကှောဘွူး။ထိုငးဘတငွှေ၂၂သနွးနဲ့ဝယရွငွမှနမွာလူမှိုးတှအမှငေမွှာတော့အရူးတှပေဲလို့ထကမွှငနွကမှောကှိနွးသကမှောပါ။ ဒါပေမဲ့မယုံမရှိကျနဲ့ဒီတိုက်ကြက်ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဘတ်၂၂သန်းကို၁နှစ၂နှစ်လောက်နဲ့အရင်းပြန်ကြေအာင်ရှာပေးတဲ့အစွမ်းအစရှိပါတယ်။ တကယ်လဲသူသခင်ကိုရှာဖွေခဲ့တာပါဒီကြက်ကိုကြက်မမျိုးကောင်းတွေအများကြီးနဲ့နဲ့သားဖောက်ရောင်းတာကြက်ဥတစ်လုံးကိုဘတ်၂၅ဝဝရောင်းပါတယ်။သားပေါက်အဖိုအမနှစ်ကောင်ကိုဘတ်၃သောင်းအကယ်၍ ကြက်ဥလဲမယူချင်ဘူးသားပေါက်လဲ့မယူချင်ဘူး ကိုယ်ဆီက ကြက်မနဲ့မျိုးထိုးခကြက်မတစ်ကောင်ဘတ်၂သောင်းပေးရပါတယ်။ကြက်မအကောင်၅ဝဝလောက်နဲ့သေသေချာချာမျိုးဆက်ပြီး ကြက်ဥထုတ်ရောင်းနေတာတောင်ကြက်မဖျင်ကထွက်တာနဲ့ဘတ်2500ပေးပြီးဝယ်ယူမဲ့လူကအဆင်သင့်ရှိတယ်။မိမိလိုချင်တိုင်းချက်ချင်းဝယ်လို့မရနိုင်ပါဘူးကြိုတ င်စာရင်းသွင်းပီးတော့မိမိအလှည့်ကျအောင်စောင့်နေရမှာပါ။မနီဒယ်ရဲ့ သားဖောက်အဖိုအမမှန်သမျှအကုန် မွေးနေ့မွေးရကနေ့နံအတိအကျပါရှိမှာပါလက်ရှိ မနီဒယ်ရဲ့ သားဖောက်တွေထဲကနေမှ ဘတ်၁ဝသန်းဘတ်၅သန်းတန်ကြေး အဆင့်နာမည်ကြီးတိုက်ကြက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲတိုက်ကြက်လောကမှာတော့မနီဒယ်ရဲ့သားဆိုရင်အလိုလိုနေရင်းတန်ကြေးမြင့်နေပါတယ်။မနီဒယ်သည်မသေဆုံးခင်အထိသူသခင်အားဘတ်ငွေ
2022မှာကံအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ့်ရာသီခွင်( ၄ )ခု
December 29, 2020 December 4, 2021 admin
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် 2022 မှာကံအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ့်ရာသီခွင်( ၄ )ခု 2021 နှစ်ကြီးကလည်း တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးဖို့နှစ်လလောက်ပဲလိုပါတော့တယ်နော်။ ဒီတော့ နှစ်သစ်မှာ ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုကံကောင်းခြင်းမျိုးတွေက စောင့်ကြိုနေမလဲဆိုတာကိုအားလုံးက မျှော်လင့်မိကြမှာပါ။လာမယ့် 2022 မှာတော့ရာသီခွင်အားလုံးထဲမှာကံကောင်းခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရာသီခွင်တွေရှိလို့နေပါတယ်နော်။ ကဲ ဘယ်လိုရာသီခွင်တွေကဘယ်လိုကံကောင်းခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားလဲဆိုတာကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့ … ။
ကြည့်ရှုသူ(၅)သန်းကျော်သွားပီဖြစ်တဲဒေါက်ဖိနပ်ဖြင့်စက်ဘီးစီးပြီးမြန်မာအကတင်ဆက်သွားတဲ့ အလှမယ် (ရုပ်သံ)
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဒေါက်ဖိနပ်ဖြင့်စက်ဘီးကိုလက်လွှတ်စီးပြပြီးမြန်မာအကကိုကပြတင်ဆက်သွားတဲ့အကောင်းဆုံး Talentဆုရှင်အိမ်ထောင်ရှင်အလှမယ် Mrs. Pa Pa Htay ဗီဒိယိုမှာပါဝင်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးကတော့ Mrs Myanmar (Online Competition S-1) ရဲ့အကောင်းဆုံးTalentဆုရှင်အိမ်ထောင်ရှင်အလှမယ်Mrs.ပပဌေး ါသူမကအဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာဒေါက်ဖိနပ်ဖြင့် စက်ဘီးကိုလက်လွှတ်စီးပြပြီး မြန် မာအကကိုကျွမ်းကျင်စွာကပြတင်ဆက်သွားပါတယ်။ ကိုယ်တွေဆိုကပြပီးစက်ဘီးစီးဖို့ရာမဆိုနဲ့လက်နှစ်ဖက်လွှတ်ပီးကိုမစီးနိုင်ပါဘူးသူမဘာ့ကြောင့်Skillကောင်းလဲဆိုတော့မပပဌေးကငယ်စဉ်ကတည်းကစက်ဘီးကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်စီးတတ်သလိုမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ရုရှားအမျိုးသမီးလေးနဲ့ဂူအောင်းထိုင်းအမျိုးသားတို့ကြားကအချစ်ဇာတ်လမ်း အသက်(၄၈) နှစ်အရွယ်Jatuphumဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေ့ချင်းညချင်းကျော်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်။Jatuphum ကရုရှားအမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးကို သူနေထိုင်ရာဂူKoh Phangan ဆီအရောက်ဘယ်လိုစကားလုံးတွေနဲ့ချုပ်ပြီးခေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အစအဆုံးကိုဖေ့စ်ဘုတ်မှာမျှဝေခဲ့ရာကနေချက်ခြင်းကိုလူသိများလာခဲ့တာပါ။ သူတင်တဲ့ပို့စ်ကိုကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတယ်လို့ဆိုသူတွေရှိသလိုကြောက်စရာကြီးလို့ဆိုသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပို့စ်ထဲမှာတော့Jatuphumကရုရှားသူလေးနဲ့သူဘယ်လိုစတွေခဲ့တယ်ဆိုတာအခုလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။တစ်နေ့Jatuphumဟာစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့မှာပိန်ပိန်သွယ်သွယ်နဲ့မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူကကာင်မလေးဆီသွားပြီးမင်းကဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်လိုက်တာပဲ။ကိုယ်ကအိမ်ပြန်မလို့လုပ်နေတာ။ဒါပေမယ့်မင်းကတော်တော်လေလှတော့ အိမ်တောင်မပြန်နိုင်ပဲဆိုင်ကယ်ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်။ကိုယ်မင်းနဲ့စကားပြောဖို့လိုတယ်။ ဒါမှမင်းကရုပ်လေးလှသလိုစိတ်ထားလေးလည်းလှမလားသိရမှာ။”ကောင်မလေးကရယ်လိုက်ပြီသူမဟာရုရှားမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုနေ့မှာKoh Phanganဆီလာလည်တဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Jatuphum ကကောင်မလေးကိုသူနေထိုင်တဲ့ဂူဆီအလည်လိုက်မလားမေးတော့သူမကအနတရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးချက်ခြင်းလက်မခံသေးပါဘူး။ဒါပေမယ့် Jatuphum ကမင်းကတခြားနိုင်ငံကဆိုတော့လူစိမ်းကသူနဲ့လိုက်ဖို့ခါ်နေတာဘယ်လိုက်နိုင်ပါ့မလဲ။ဒါပေမယ့်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ကိုယ်ခေါ်သွားမယ့်နေရာက လူသူနဲ့
ဘုရားမြွေဆိုတာတကယ် ရှိသလား?ဘုရားပေါ် မှာမြွေတွေထားသင့် သလား?
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဘုရားမြွေ ဆိုတာ တကယ် ရှိသလား? ဘုရားပေါ် မှာ မြွေတွေ ထားသင့်သလား? အခုpostက ဆန့်ကျင့်ရေးpostပါအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးပါဝင်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာကိုဆန့်ကျင်မလဲဆိုရင်မြွေတွေကိုဘုရားမြွေတွေလုပ်နေတဲ့အချက်ကို လုံးဝဆန့်ကျင့်ပါတယ်။ဘုရားမြွေအလုပ်ခံရဆုံး မြွေတွေက Burmese python နဲ့ Reticulated python တွေများပါတယ်။